SA News: Wales consider playing South Africa in USA ahead of Argentina tour MyZA
You are here: Home / South Africa / SA News: Wales consider playing South Africa in USA ahead of Argentina tour
Wales consider playing South Africa in USA ahead of Argentina tour: Wales are exploring the possibility of playing South Africa in June 2018 ahead of their two Test tour to Argentina. The fixture could be played on neutral turf in Washington, USA, on 2 June. Welsh Rugby Union chief executive Martyn Phillips refused to name …
Bavuma hits timely 70 to boost South Africa Test bid: Paarl (South Africa) (AFP) – Test batsman Temba Bavuma hit a fluent 70 as a South African Invitation team took a 91-run first innings lead against the touring Zimbabweans on the second day of their three-day day-night match at Boland Park on Thursday.
Details of the latest meeting between Zuma and Mnangagwa: President Jacob Zuma and President Emmerson Mnangagwa of Zimbabwe have undertaken to strengthen economic trade and cooperation between South Africa and Zimbabwe. President Zuma today, 21 December 2017, received a courtesy call from President Mnangagwa at …
Suresh Raina clears Yo-Yo test ahead of South Africa tour: Indian all-rounder, Suresh Raina’s emphasis on fitness throughout the ongoing domestic season has paid off as the southpaw has cleared the Yo-Yo test at the National Cricket Academy in Bangalore. The 31-year-old’s bid to earn a national recall has now …
Previous: SA News: UPDATE 1-Workers down tools at Pan African’s main South Africa gold mine -source
Next: SA News: READ: Cyril Ramaphosa’s first speech as ANC president